Skype for iOS dia nohavaozina manampy antsika hiarahaba ny fialantsasatry ny Noely | Vaovao IPhone
Skype for iOS dia nohavaozina manampy antsika hiarahaba ny fialantsasatry ny Krismasy
Skype no rindrambaiko, fa ny serivisy, ahafahantsika mifandray amin'ny faritra rehetra eto amin'izao tontolo izao, na maimaim-poana, amin'ny alàlan'ny fiantsoana mpampiasa hafa na amin'ny fiantsoana telefaona an-tariby na finday, antso izay manana lozika ananantsika mandoa. Nandritra ny taona vitsivitsy izao, Skype dia teo am-pelatanan'i Microsoft, izay dia nanampy fonosana vaovao hiezaka hifaninana amin'ireo sehatra fandefasan-kafatra manjaka amin'ny finday avo lenta izany. Ny sasany amin'izy ireo dia mahomby, na izany aza hitantsika ny hafa izay tsy manana ny toerany amin'ny tanjon'ny mpampiasa mahazatra an'ity sehatra ity.
Na dia mbola manohy manampy asa vaovao aza i Microsoft mba hahafahan'ny fampiharana ity mifaninana amin'ny WhatsApp, Telegram, Line, Viber sy ny hafa, ny fampiharana Skype ho an'ny fitaovana finday dia mbola mandray andraikitra sy vaovao hatrany. Ny fanavaozana farany ny fampiharana dia mamela antsika mandefasa haingana amin'ny video ny malalantsika mandritra ny fialantsasatra, amin'ny alàlan'ny fanindriana fotsiny ny hiran'ny oram-panala izay miseho eo akaikin'ny sary famantarana Skype.
Fa ankoatr'izay dia nanararaotra ity fanavaozana ity i Microsoft ho amboary ny olana amin'ny fampandrenesana foibe fampandrenesana, izay niangonan'izy ireo na dia teo am-piresahana aza izahay ary nanatsara ny fiverenan'ny resaka izay navelantsika tsy nahy.
Inona no vaovao amin'ny kinova 6.30 an'ny Skype
Mampiità fifaliana bebe kokoa mandritra ny fialantsasatra amin'ity taona ity Mizara hafatra an-tsary amin'ireo olon-tianao mandritra ny fialantsasatra. Tsindrio ny bokotra snowflake eo akaikin'ny logo Skype hanombohana.
Nesorina tao amin'ny Notification Center ny fampandrenesana rehefa nandefa ny fampiharana Skype hisorohana ny fanangonana zavatra.
Efa nanidy ny fampiharana tsy nahy ve ianao nandritra ny fiantsoana vondrona fa tsy afaka mamerina azy io? Mora izao ny miverina amin'ny antson'ny vondrona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Skype for iOS dia nohavaozina manampy antsika hiarahaba ny fialantsasatry ny Krismasy
Araka ny filazan'ny Apple, ny BeatsX vaovao dia ho hita amin'ny volana feb
Apple dia afaka nanambola $ 1.000 XNUMXM amin'ny SoftBank Technology